Sharabaad (Af Ingiriis : socks; ) wadar ahaan noqoneysa Sharabaado sidoo kale looga yaqaano koonfurta Soomaaliya Sigiis (wadar: Sigiisyo), waa nooc ka mid ah hu'ga kuwaasi oo lagu xidho lugaha si uga ilaaliyo lugaha dhamaan wixii khatar ah. Sharabaaduhu waa sheey ka tirsan dharka taasi oo lagu xidho lugaha. Sharabaaduhu waxay ka mid yihiin hu'ga caadiga ah ee si joogto ah dadku isticmalaan dhamaan dacalada caalamka. Si la mid ah dharka noocyadiisa kala duwan, sharabaadaha waxaa laga sameeyaa dun, cudbi iyo waxyaabo kale oo la isku daray. Qaar ka mid ah sharabaadaha waa shay dabacsan oo ka samaysan dun, ama cudbi, ama harag kaasi oo la tolay. Dharka waxaa laga sameeyaa dun ka timaada haraga xoolaha, xayawaanka iyo cudbiga iyo noocyo aartifishal ah. Marka dharka la samaynayo waxa la isticmaalaa habab badan oo kala duwan, waxaa ugu caansan tolida, mareegida, iyo isku xidhxidhka dunta.
Dharka (Af Ingiriis : Textile ama Cloth; ) waa shay dabacsan oo ka samaysan dun la xardhay. Dharka waxaa laga sameeyaa dun ka timaada haraga xoolaha, xayawaanka iyo cudbiga iyo noocyo aartifishal ah. Marka dharka la samaynayo waxa la isticmaalaa habab badan oo kala duwan, waxaa ugu caansan tolida, mareegida, iyo isku xidhxidhka dunta. God ku yaala galbeedka wadanka Joorjiya ee bariga Yurub ayaa waxa laga helay qidcad harag oo lagu wado in dhar ahaan loo isticmaali jirey wakhti hada laga joogo 34,000 oo sano. Dharka guud ahaan waxaa la isku yidhaahdaa Hu'; kaasi oo u kala baxa noocyo badan. Kugu ugu muhiimsan ee dadku isticmaalaan maalin kasta waxaa ka mid ah: surwaalka, shaadhka, diraca, shalmada, goonada, koodhka, kabaha iyo kuwo kale oo badan.